စားရမှာတောင် ကြောက်လာတယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » စားရမှာတောင် ကြောက်လာတယ်
Posted by မောင်ဆန်း on Oct 18, 2011 in Business & Economics, Complaint / Claim | 21 comments
ဒီတပတ် voice ဂျာနယ်မှာ “စားအုန်းဆီကို ဆပ်ပြာမှုန့်ရောပြီး ပဲဆီအဖြစ်လိမ်ရောင်း ” ဆိုတဲ့ သတင်းလေး တစ်ပုဒ် ပါလာပါတယ် သတင်းမှာ ပါတာက “ အေးလျှင်ခဲတတ်သော အာနိသင်ရှိသည့် စားအုန်းဆီကို မခဲရန် အနံ့ပျော့ဆပ်ပြာမှုန့်များ ရောကျိုကာ ပဲဆီအနံ့သွင်းပြီး ပဲဆီအဖြစ်ရောင်းချမှုများရှိနေကြောင်း တောင်ဒဂုံ စက်မှုဇုန်မှ ဆုံဆီသီးသန့် ရောင်းချသူ တစ်ဦးကပြောကြားသည်။ ဈေးသက်သာသော စားအုန်းဆီကို မီးအပူပေးကျိုပြီး အနံ့သိပ်မပြင်းသည့် ဆပ်ပြာမှုန့်များနှင့် ရောလျှင် စားအုန်းဆီသည် ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်လျှင်ပင် မခံဘဲ အရောင်မှာလည်း ကြည်လာကြောင်း ဆပ်ပြာမှုန့်ရောထားသည့် စားအုန်းဆီ တစ်ပီပါကို မြေပဲရနံ့ တစ်အောင်စလျှင် ပဲဆီနှင့် ဆင်တူယိုးမှား ဖြစ်သွားပြီး ပဲဆီအဖြစ် ဈေးမြှင့်ရောင်းကြကြောင်း ၄င်းက ဆက်လက်ရှင်းပြသည်။ အိမ်ရှင်မအများစုသည် စားအုန်းဆီသာခဲပြီး ပဲဆီဆိုလျှင် မခဲဟု လွဲမှားစွာ မှတ်ယူထားကြသဖြင့် မခဲအောင် ဆပ်ပြာမှုန့် ရောကျိုခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုခေတ်တွင် ဓာတုဗေဒနည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော ရနံ့မျိုးစုံလွယ်ကူစွာ ၀ယ်ယူရနေသဖြင့် မခဲအောင်လုပ်ထားသည့် စားအုန်းဆီကို အနံ့သွင်းပြီး မြေပဲဆီအဖြစ် လိမ်ညာရောင်းချခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ မြေပဲဆီမှန်လျှင် မခဲဟုသာ မှတ်ယူထားသော အိမ်ရှင်မများ၏ ဗဟုသုတသည် လွဲမှားနေကြောင်း မြေပဲဆီကြိတ်လျှင် ရေနွေးဖျန်းပြီးမှ ကြိတ်ရပြီး ဆီစစ်များနှင့် ကောင်းစွာမစစ်နိုင်လျှင် မြေပဲဆီအစစ်သည်လဲ ရေခဲသေတ္တာထဲကို ထည့်ထားလျှင်ခဲကြောင်း၊ ယခုဖြစ်စဉ်သည် အိမ်ရှင်မများ အသိအမှတ်လွဲမှုအပေါ် အခွင့်အရေးယူ အသုံးချခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း ပခုက္ကူမြို့မှ ဆီစက်လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးကပြောဆိုသည်။ ယခင်က စားအုန်းဆီနှင့် မြေပဲဆီရောပြီး အနံ့ကောင်းစေရန် မြေပဲရနံ့ထည့်ကြောင်း၊ ယခုစားအုန်းဆီကို မခဲအောင်လုပ်ပြီး မြေပဲရနံ့ဖြင့် မြေပဲဆီဟုရောင်းနေသည်ကို ကြားနေရကြောင်း ၄င်းကရှင်းပြသည် ။ မြေပဲဆီအစစ်ဆိုရင် လျှာပေါ်မှာ ဆိမ့်ပြီး ကျန်ခဲ့တဲ့အရသာကို သတိပြုသင့်တယ် ဟု ၄င်းက ရှင်းပြသည်။ လက်ရှိမြေပဲဆီ လက်ကားဈေး တစ်ပိသာ ၃၇၀၀၊၄၀၀၀ ကျပ်ခန့်ရှိပြီူး မြေပဲဆန်တပိသာ ၁၂၀၀၊၁၀၀၀ ကျပ်ခန့် ရှိကာ စားအုန်းဆီ လက်ကား တပိသာ ၁၆၅၀၊ ၁၇၀၀ ကျပ်ခန့်သာ ရှိသဖြင့် ဆီရောရောင်းလိုသူများပင် တွက်ခြေကိုက်ကြောင်း ရန်ကုန် ဘုရင့်နောင် စားအုန်းဆီ ဈေးကွက်အတွင်း စုံစမ်းသိရှိရသည် ” လို့ ရေးထားတယ်
ဆီတွေ သုံးရမှာ ကြောက်လာတဲ့အချိန် နောက်သတင်း တစ်ခုက မော်ဒန်သတင်းဂျာနယ်က ခင်မောင်ဝင်း(စစ်တွေ)ရဲ့ သတင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပါ စာရေးသူက သူ့မိတ်ဆွေအိမ်ရောက်လို့ နနွင်းမှုန့်ရောင်းနေတာတွေ့တယ် နနွင်းတပိသာကို ၃၀၀၀ လောက် ၀ယ်ရတယ် အဲဒါကို အမှုန့်ကြိတ် ပြန်ရောင်းတော့ နှစ်ဆယ်သား တစ်ထုတ်ကို ၄၀၀ (တပိသာရောင်းမှ ၂၀၀၀ ပဲ ရမယ်) ဒီအတိုင်းဆို ရှုံးနေပြီ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ဆိုပြီး မေးကြည့်တော့ သူ့မိတ်ဆွေက ရှင်းပြတာ နနွင်းတက်ကို စက်နဲ့ကြိတ်တိုင်း နနွင်းမှုန့်ဖြစ်တာ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ ကြိတ်ထားတဲ့ နနွင်းမှုန့်ထဲကို နနွင်းလို မှုန့်နေတဲ့ အမှုန့်တစ်မျိုးရော (ဘာအမှုန့်လဲ ၊စားသုံးလို့ အန္တရာယ် ရှိ၊မရှိ ဘယ်သူမှ မသိနိုင်ဘူး) ၊ နောက် အလေးချိန်တက်ဘို့နဲ့ ကြာရှည်ခံအောင် ဆားထပ်ရောတယ် ဆားမှာ အရည်မပျော်အောင် ရိုးရိုးချက်ဆားမဟုတ်ပဲ နေလှန်းဆားရောပါတယ် ရောတဲ့ အချိုးအစားက နနွင်းမှုန့် တပိသာကို ရောတဲ့အမှုန့်က ငါးပိသာ နေလှန်းဆားအမှုန့်က တစ်ပိသာ ရောပါတယ် ငါးပိသာ ထည့်တဲ့အမှုန့်ကို အ၀ါရောင် ဖြစ်အောင် ဆိုးဆေးလဲ သုံးပါသေးတယ် အဲဒီအတွက် ကုန်ကျစရိတ်က နနွင်းတစ်ပိသာက ၃၀၀၀ ၊ ရောတဲ့အမှုန့် ငါးပိသာက ၈၀၀ ၊ ဆိုးဆေးဘိုးက သိတ်မကျပါဘူးတဲ့ (ဒါဆို သေချာပြီ စားသောက်ကုန်မှာ ရောခွင့်ပြုထားတဲ့ ဆိုးဆေးမဟုတ်ပဲ စက်မှုသုံး ဆိုးဆေးတွေပဲဖြစ်မယ်) ၊ ဆာတစ်ပိသာက ၁၅၀ ၊ ကြိတ်ခတပိသာက ၂၀၀ ဆိုတော့ စုစုပေါင်း ခုနှစ်ပိသာအတွက် ကျပ် ၄၁၅၀ ကျမယ် အဲဒီတော့ တစ်ပိသာကို အရင်း ၅၉၂ ကျပ် လောက်ကျမယ် အဲဒီမှာ ပလပ်စတစ်အိတ်ဘိုး ၊ နနွင်းမှုန့်အစစ်လို့ ရေးထားတဲ့စာရွက်ဘိုး၊အလုပ်သမားခပေါင်းမှ တစ်ပိသာကို ၆၀၀ လောက် ကျမယ် ရောင်းတော့ ၂၀၀၀ အမြတ်ကို စဉ်းစားသာ ကြည့်ပေတော့ ဒါက နနွင်းမှုန့် ၊ ဒီလိုပဲ ရယ်ဒီမိတ် ငရုတ်သီးမှုန့် ဆိုလဲ ငရုတ်သီး အညှာတွေ၊ ဖြူဖတ်ဖြူရော် ငရုတ်သီးခြောက်တွေ ငရုတ်ပင်အရိုးတွေ ကို ထုထောင်ကြိတ် အရောင်ဆိုး ပြီး သဘာဝ ငရုတ်သီးမှုန့်စစ်စစ်လို့ရောင်းနေကြပါသတဲ့ …..
ဖတ်ရင်းနဲ့တောင် တော်တော်လန့်လာတယ် စားသုံးဆီထဲ ဆပ်ပြာရောတယ် နနွင်းမှုန့်ထဲ ဘာမှန်းမသိတဲ့ အမှုန့်တွေ ရော အရောင်တွေ ဆိုးတယ် ဆိုတာ တော်တော်ကို အန္တရာယ်များနေပါပြီ အရောအနှော တွေ အတု လုပ်တဲ့ ကိစ္စတွေက နည်းပညာ တိုးတက်လာတာနဲ့အတူ လူတွေရဲ့လောဘတွေ စားသုံးသူတွေရဲ့ အသိဥာဏ်ပညာ နည်းပါးမှုတွေကြောင့် ပိုပိုများလာပါတယ် လက်ဖက်၊ ငါးပိ၊ မျှစ် တွေကို အရောင်ဆိုးတယ် ငါးခြောက်လှန်းရင် ယင်မနားအောင် ယင်မနားဆေးရည်(ပိုးသတ်ဆေး)တွေ သုတ်တယ် ဖျော်ရည်တွေမှာ လိုချင်တဲ့ အသီးရဲ့ အနံ့တွေ အရောင်တွေ ရအောင် ဓါတုဗေဒပစ္စည်းတွေ သုံးတယ် ၊ ငှက်ပျောသီးမှာ အရင်းနား စိမ်းနေသေးပေမဲ့ အပေါ်ကအသီးက ဆေးစိမ်ထားလို့ မှည့်နေပြီ ၊ခြင်ဆေးခွေမှာ ခြင်ပိုသေအောင် သတ်မှတ်ခွင့်ပြုထားတဲ့ ပမာဏာထက် ကျော်တဲ့ အဆိပ်တွေ သုံးတယ် ကြာလေ ကြာလေ နေရ၊စားရတာ အန္တရာယ်တွေက ပိုများလာပါတယ် နေ့စဉ် စားသုံးနေတဲ့ အစားအသောက်တွေ ကနေ ရောဂါမျိုးစုံရပြီး အသက်တိုရမဲ့ကိန်း ဆိုက်နေပါပြီ …..
ဒီလို သတင်းမျိုးကို သတင်းသမား တစ်ယောက်ကတောင် သိတယ်ဆိုတော့ တာဝန်ရှိသူတွေက သိချင်တဲ့ စိတ်လေးသာရှိရင် အလွယ်တကူ သိနိုင်တဲ့ အနေအထားပါ ၊ တာဝန်ရှိသူတွေကလဲ စုံစမ်းဖော်ထုတ် ၊ FDA ကလဲ သေချာစစ်ဆေး ၊ အန္တရာယ်ရှိကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရင်လဲ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူ သင့်ပါတယ်(တရုတ်မှာ မယ်လမင်းထည့်တဲ့သူ သေဒဏ်ပေးသလို ပြတ်ပြတ်သားသား လုပ်ရမှာပါ ) ရိုးရိုးရေ သောက်ရင် ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှာ စိုးလို့ ရေသန့်ဝယ်သောက်မိမှ ဘုံဘိုင်ကရေကို ရေစစ်လေးနဲ့ စစ်ထဲ့လာတဲ့သူ ၊ စာအုန်းဆီ ဆို ကြောက်လို့ ပဲဆီကို ဈေးကြီးပေး ၀ယ်သုံးကာမှ ပဲဆီမရောင်းဘဲ စားအုန်းဆီထဲ ဆပ်ပြာနဲ့ရောတဲ့သူတွေကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ သက်ညှာပေးစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး..
FDA အပိုင်းက လုပ်နိုင်သလောက် လုပ်နေပေမဲ့ သူတို့မှာ ရှိတဲ့ လူအင်အား ဘတ်ဂျတ်အခြေအနေနဲ့ ဈေးကွက်မှာ ရှိတဲ့ ပစ္စည်းရဲ့ တ၀က်လောက်ကို စစ်ပေးနိုင်ရင်တောင် ကံကောင်းပါ ၊ အစိုးရအပိုင်းက လူ၊ငွေကြေးသုံးစွဲနိုင်မှုအပိုင်း ကို တဖြည်းဖြည်း တိုးချဲ့သွားဘို့လိုသလို ပြည်သူတွေအပိုင်းကလဲ ကိုယ်နိုင်တဲ့ ၀န် ၊ ကိုယ် ၀င်ထမ်းမှ ပိုအဆင်ပြေမှာပါ အစိုးရမှာ FDA ရှိသလို ၊ အပြင်မှာလဲကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်း စက်ကိရိယာ အပြည့်အစုံနဲ့ သမာသမတ်ကျကျ စစ်ဆေးပေးနိုင်မဲ့ NGO တွေ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းတွေ ပေါ်လာဘို့ အစပျိုးသင့်ပါပြီ ( တကယ်တော့ နောက်တောင်နောက်ကျနေတာပါ)အစားအသောက်တိုင်းက စစ်ဆေးထားတဲ့ လက်မှတ်ပါဘို့လိုပြီး အဲဒီအဖွဲ့အစည်းတွေက စစ်ဆေးထားတဲ့ လက်မှတ်ပါရင် ဘာစိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုမှ မရှိဘဲ စားသုံးနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုး ဖြစ်သင့်နေပါပြီ …..
အရောအနှော အတုအယောင် သတင်းတွေ အတွေ့များလာပြီး လူလဲ စိတ္တဇဖြစ် လာပါတယ် ဟိုအစာရော ဘာရောထားမလဲ ဒီဟာရော သန့်ပါ့မလားနဲ့ တွေးမိလာပါတယ် ၊ ကြော်လိုက်ရင် ငါးနံ့လေးမွှေးပြီး စားရတာ မွနေတဲ့ ငါးမုန့်ကရော တကယ့်ငါးအနံ့မှ ဟုတ်ရဲ့လားလို့ စဉ်းစားမိတာနဲ့ အရင်လို အားရပါးရတောင် မစားဖြစ်တော့ပါဘူး အစားအစာတွေကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ စားရမှာတောင် ကြောက်လာပါတယ် အင်း … ဒါပေမဲ့လဲ ကြောက်ကြောက်နဲ့တော့ စားနေရဦးမှာပါပဲ…..
ဖတ်ရင်းနဲ့တောင်ကြောက်လာပြီ … တွေးလိုက်ရင်း အားလုံးကြောက်စရာတွေချည်းပါပဲလား …
အခုတလော မစားရဲတာတွေများပြီး အပြင်ဆိုင်ကအစားအစာတွေကို လုံးဝ မစားဖြစ်သလောက်ဖြစ်လာပြီ … အိမ်မှာ ကိုယ်တိုင်ချက်စားတာတောင်မှ စိတ်မချရဘူးဆိုတော့ …. ဘယ်လိုလုပ်မလဲ …
ဒီအတိုင်းဆို၇င် မြေပဲကို ကိုယ့်တိုင်စိုက် ဆီကို ကိုယ်တိုင်ကြိတ်..ကြက်ဆိုးလည်း ကိုယ်တိုင် မွေး .. နနွင်းပင်လည်း ကိုယ်တိုင်စိုက်.. ကိုယ်တိုင်အမူန့်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးမှာစာရမယ်။ ကျွန်မ တို့ ရွာမှာတော့ မြေပဲက အစ အသီးအနှံတော်တော် များများ ကို ကိုယ်တိုင်စိုက်ပြီး စားကြတာဆိုတော့ သိပ်ပြသနာမ၇ှိသေးဘူး.. ဒါပေမဲ့ ရန်ကုန်မှာနေတဲ့ ကျွန်မ ကတော့ အကုန်လုံးကိုေ၇လုံပြုတ် ပြီ:စား၇မလိုဖြစ်နေပြီ..။ ဆီးသုံးစ၇ာမလို နနွင်းသုံးစ၇ာ မလို၇င်လည်း စားမယ့်အသီးအရွက် က ပိုးသတ်ဆေးတွေ ဓါတ်မြေသြဇာတွေ နဲမလွတ်ကင်းတော့.. အင်း ဘာမှ မစားဘဲနေတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တယ်…. :D
မနက် ကတင် အိမ်မှာ ပြောဖြစ်တယ် ကိုယ်တိုင် ကျန်းမာရေးအသိနဲ့ ဂရုစိုက်ပေမဲ့ အသုံးပြုရတဲ့ ပစ္စည်းတွေက မြင်ရုံနဲ့ သိတာ မဟုတ် ၊ အိမ်မှာ ကောင်းပါတယ် ဆိုတာတောင် အပြင်ဆိုင်တွေက ဘာတွေသုံးလဲ ဘယ်လိုမှ မသိနိုင် ၊ ကိုယ့်အိမ်မှာ စားမဲ့ဟာ အားလုံးကို နယ်မှာ လူ ထား စိုက်ပျိုး ကုန်ကြမ်း ကနေ ကုန်ချောထိ ကိုယ်တိုင်လုပ်မှပဲ ရတော့မယ် အဲဒီလိုလုပ်နိုင်လောက်တဲ့ အင်အားကမရှိ…
ဒီခေတ်ကတော့ စားစရာတင် အတု အရော မဟုတ်ဘူး နေရာတကာမှာကို အတု အရောတွေ ဖြစ်နေတာ
တစ်ခါ တစ်ခါ စဉ်းစားမိတယ် ကျွန်တော်တို့ သူကြီးကရော အစစ်ဆိုတာ သေချာရဲ့လားလို့….
ဖတ်ရင်း လန့်လာတယ်။ ဘာဟင်းချက်ချက် ဆီက မပါ မဖြစ်မို့ လုပ်တဲ့သူတွေဟာ အသက်ပေါင်းများစွာကို ခြိမ်းခြောက်နေတာမို့ သေဒဏ်ပေးသင့်တယ်။ တခါတည်း မှတ်သွားအောင်။ မမှီတို့ကတော့ ငယ်ကတည်းက အခုထိ နှမ်းဆီပဲ သုံးတယ်။ အမေတို့က ကိုယ်တိုင်စိုက်ပြီး ဆီကို ကိုယ်တိုင်ကြိတ်စားတယ်။ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါသည်တွေ အတွက် ကောင်းတယ်ပြောတယ်။ စားရတာခါးပေမဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် သုံးသင့်တယ်။ နှမ်းစိုက်ပြီး ကြိတ်တာတောင် တချို့ဆီစက်တွေက ကြိတ်ခပဲ ယူတာမဟုတ်ဘူး ဆီကို ခိုးထားပြီး စားအုန်းဆီ ရောပေးလို့ ပြသနာဖြစ်ကြသေးတယ်။ ကြိတ်နေကြမို့ တတင်း ဘယ်နှစ်ပိသာ ထွက်တယ်ဆိုတာ သိလို့ လျှော့ပေးလို့ မရလို့ ရတဲ့နည်းနဲ့ ခိုးတာလေ။ မှန်ကန်တယ်လို့ နာမည်ကြီးတဲ့ ဆီစက်မှာ ကြိတ်တာတောင် စက်ထဲမှာ အစအဆုံး စောင့်ယူရတယ်။ လူတွေဟာ တိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်နဲ့အညီ လောဘတွေပါ တိုးလာသလား မသိပါဘူး။ နိုဇိုမီ ပြောတာနဲ့ မမှီလန့်လာပြီ။ မမှီက ဗမာပြည်က ငါးမုန့်မှ စားကောင်းတယ် ထင်လို့ တကူးတကကို မှာစားတာ။ ဟီး…အခုစားရဲတော့ဘူး။
ရောင်းတဲ့လူတွေ လောဘကြီးတယ်ဆိုပြီး အပြစ်တင်စရာဖြစ်သလို
စားသုံးသူတွေကလည်း ဈေးအရမ်းမြင့်ရင် မသုံးချင်တော့ဘူး
ဈေးလေးတော်ရိရော်ရိလောက်မှ ၀င်ငွေနဲ့ အိုကေမှာဆိုတော့
ခုနကပြောသလို နနွင်းတစ်ပိဿာ ၃၀၀၀ဈေးဆိုရင်
အမှုန့်ကြိတ်ပြန်ရောင်းလို့ဝယ်ချင်ရင် တစ်ပိဿာ ၄၀၀၀ကျော်လောက်ကျသွားမှာ
အဲဒီအခါ “ဟွန်း၊ ဈေးကလည်း ခေါင်ခိုက်လို့၊ ပိုက်ဆံကို ချိန်ခွင်နဲ့ချိန်ဝယ်ရမယ့်ကိန်းပဲ”ဆိုပြီး
စားစရာတိုင်းမှာဆိုးဆေးတွေနဲ့ဆိုတော့ ထမင်းပူပူလေးကိုပဲဆီဆမ်းဆားဖြူးလေးနဲ့စားရမှာတောင် ကြောက်သွားပြီ
အခုလောက်.. စံနစ်တကျ ယုတ်မာတဲ့ လုပ်ရပ်တွေမကြားဖူးဘူး..။
ဒါတွေက … လူ့ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ဆိုင်တာပဲ…။ အရင်းမြစ်က.. ကိုးကွယ်ယုံကြည်ရာပဲ..ဘာသာရေးပဲ..
အဲဒီတော့.. ဘာသာရေးနဲ့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုကို သင်ပေးနေတဲ့ ဆရာတွေမှားနေတယ်.. မှားနေတယ်.. ထပ်ခါပြောတော့လည်း.. ကျုပ်ဝိုင်းဆဲကြရောပဲ..။
ထို့ ကြောင့်ဖြစ်၏၊ ကျမ်းစစ်ကျမ်းမှ အဟောတည်း…။ တဲ့..။
တိုင်းရေးပြည်ရေး.. ရာသီဥတု မှားယွင်းချွတ်ချော်တာတွေက… ဘုန်ကြီးတွေနဲ့ဆိုင်တာ.. ရှေးကတည်ကပြဆိုညွှန်းတယ်..။
မဟုတ်တာတွေနဲ့.. မဟုတ်တာတွေဖြစ်အောင်..ပေါက်တတ်ကရတွေ သင်ကြားနေသူတွေ… တည်မြဲနေပါလား..။
ဒီသဂျီးနဲ့တော့ခက်ပြီ။ မကောင်းတာမှန်သမျှ ဘာသာရေးကြောင့် ဆိုတာပဲ။ လွပ်လပ်ခွင့်မရှိ၊ ဥပဒေမဲ့နေတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ ယိုင်နဲ့နဲ့တိုင်းပြည်တပြည်မှာ အခုလိုဖြစ်တာ အဆန်းလား။ ဘုန်းကြီးတွေကရော တိုင်းပြည်မှာ ပြုပြင်ရေးလုပ်ခွင့်ရလို့လား။ လူတွေရင် တွေးပုံခေါ်ပုံ ကိုယ်ကျင့်တရား အယူသီးမှုတွေက အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်အပေါ် အများကြီးမူတည်တယ်…။ ပိတ်လှောင်ခံထားရတဲ့ အကောင်တွေ ဖောက်မထွက်နိုင်တဲ့အခါ အချင်းချင်း ပတ်ရမ်းတာ သဘာဝပဲ။ ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းလို့ ဖိနှိပ်သူအစိုးရကို မတွန်းလှန်နိုင်တာဆိုရင် လက်ဝဲဝါဒ အားကောင်းချိန်တုန်းကရော ဘာထူးလို့လဲ။ ကိုယ်လိုရာ အရမ်းကာရော ဆွဲမတွေးနဲ့ဗျို့၊ ဘုရားကနေပေမဲ့ ငရဲကမနေဘူး..။ :mad:
ဒီကွန်းမန့် တစ်ခုထဲ ဖတ်မိရင်တော့ သူကြီးဆိုတဲ့လူက တစ်ဖက်စွန်းရောက်နေတဲ့လူလို့ထင်စရာပဲ
နေရာတိုင်းမှာ အကောင်း၊အဆိုး ဆိုတာ ဒွန်တွဲနေတာ ဖြစ်လို့ ဘုန်းကြီးဆိုရင် ကောင်းတယ် စစ်သားဆိုရင်ဆိုးတယ် အခုခေတ်ကျောင်းသားတွေ ညံ့တယ်၊ တောကလူတွေက မယဉ်ကျေးဘူး ဆိုတဲ့မှတ်ချက်မျိုးက ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ ရမ်းသလို ဖြစ်နေတယ် ဘုရားဟောတဲ့ တရားတွေကို အတိအကျ လိုက်နာတဲ့ သံဃာတော်တွေက ကောင်းတယ် ပုထုဇဉ်ဖြစ်လို့ မလိုက်နာတဲ့သူ သွေဖယ်တဲ့သူ ရှိတယ် သူတို့က မကောင်းဘူး ၊ စစ်စည်းကမ်းကို လိုက်နာတယ် တရားဥပဒေကို လေးစားတယ် ဒီစစ်သားကကောင်းမယ် သူရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် မကောင်းတဲ့ စစ်သားရှိမယ် တခြားဥပမာတွေမှာလဲ မှန်တာ ရှိသလို မှားတာလဲ ရှိနေမှာပဲ
သူကြီးညွှန်းတဲ့ စာမှာတောင် “မင်းသား၊ရဟန်း ပေါ့သွမ်းတိမ်းစောင်း၊ မကောင်းကျင့်ညစ်”
လို့ ပြောထားတာ မင်းသားကြောင့်လို့လဲ ယူလို့ရပါတယ် ၊ သူကြီးက အပေါ်က ပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး လူမဆန်တဲ့ လူတွေရဲ့ လုပ်ရပ်ကို ဒေါကန်လို့ ဒါကို လက်ခံနေတဲ့ အသိုင်းအ၀န်းကို အားမရလို့ ပြောတယ်ဆိုတာ နားလည်ပါတယ်
ဒါတွေ ဖြစ်နေရတာ အဓိက အကြောင်းက ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးရဲ့ အသိဥာဏ်ပညာ အားနည်းမှုကြောင့်ပဲ အသိဥာဏ် ပညာရေချိန်သာ မြင့်ရင် လူစိတ်မရှိတဲ့သူတွေကလုပ်လဲ အဲဒါကို ကာကွယ်တာဆီးနိုင်မဲ့ ဥပဒေတွေ ရှိလာအောင် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနိုင်အောင် တွန်းအားပေးနိုင်မှာပဲ အခုကတော့ အဲဒီလိုလုပ်ရမယ် တောင်းဆိုရမယ် မကောင်းတာတွေကို ရှောင်ရှားရမယ် ဆိုတာတောင် မသိတဲ့သူက အများစုဖြစ်နေတာ ၊ ဒါလိုလူတွေ များများတွေ့လေ သူကြီးရဲ့ ဖြစ်စေချင်တဲ့ စေတနာကို သဘောပေါက်လေပါပဲ
အဲတာ အမြန်ဆုံး အရေးယူကြပါတော့လား ဟရို့ ..
ကို နိုဇိုမိ ရေ
ဂျက် (ကွမ်းခြံကုန်း) ရေးတဲ့ စီးပွားရေးသမားများနဲ့ အင်တာဗျူးစာတိုလေး တစ်ပုဒ်ကို ပြောပြဦးမယ်
သံတွဲဘက်က လူတစ်ယောက် က မြေမှုန့် အဖြူတွေ ကို သန့် စင်ပြီး ဘိလပ်မြေ နဲ့ ရောတယ် တဲ့
ကျောက်စရစ်ခဲ နီညိုရောင်လေး တွေ ကို ပဲသမားတစ်ယောက် က သူ့ အိတ်တွေထဲ တစ်တင်း တစ်ပြည်တဲ့ ။
သုံးပြီးသား ဓါတ်ခဲကိုခွာပြီး အထဲကပါတဲ့ ကမ်မီကယ် ကို စမုံနက် တဲ့
အုတ်နီခဲကို အမှုန့် ကြိတ်ရင် သွေးဆေး တဲ့
အဲဒိစားအုန်းဆီကို ပိတ်ပြီးဖမ်းပစ်လိုက်မှ အေးမှာ……..
ပဲဆီ အတွက်တော့ အခက်သား … နနွင်းအတွက်ကတော့ ကိုယ်ဟာကိုယ်ဝယ်ပြီး
အမှုန့်ကြိတ်စား လို့ရနိုင်ပါတယ်… ငြုပ်သီးမှုန့်အတွက်လဲ ငြုပ်သီးခြောက်ကို
ဝယ်ပြီး ကိုယ်တိုင် အမှုန့်ကြိတ်လို့ ရနိုင်ပါတယ်….ကျန်းမာရေးအတွက် ကသီကလင်
ခံ ရတော့မှာ… ကျုပ်တို့ မိသားစု တော့ အဲဒီလို စပြီးလုပ်နေပြီ ဗျို့….စဉ်းစားပြီး….
တစ်နုံ့နုံ့ စိတ်ဆင်းရဲခံရမဲ့ အဖြစ်မျိုးတော့ လက်သင့်မခံချင်တော့လို့ပါ…။
ငါးမုန့်လေး ကြွပ်နေတာ ပလပ်စတစ်ပါလို့ ကြွပ်နေတာ ဖြစ်နေအုန်းမယ် ဆရာရေ..
စားအုန်းဆီ ကို ပဲဆီ ဖြစ်အောင် အရင်က ကြားဖူးတာကတော့ မြေပဲ ၁ပိဿကို တူးအောင် ကြော်ပြီး စားအုန်းဆီ ပီပါထဲမှာ ပိတ်ပါးနဲ့ ထည့် စိမ်ထားပြီး တည သိပ်ထားပြီး မနက်ရောက်တော့ ပဲဆီ အစစ်လို မွေးကြိုင်နေတယ်လို့ ပြောသံကြားဖူးတာပါ။ ဂျာနယ်ထဲမှာတော့ အနံ တအောင်စ ဆိုတော့ ပိုပြီးတော့ သေချာ မှာပေါ့။
မကောင်းတာကို မကောင်းမှန်း သိခဲ့လျှင် အမျိုးသားရေး အမြင်နဲ့ အားလုံး ၀ိုင်းဝန်းတူညီ ဖယ်ရှားသင့်တယ်။ သို့သော် သို့သော်.. သို့သော်…..
ပြဿနာတခုက ကျွန်တော်တို့လူမျိုးက ဈေးပေါချင်တာလဲပါတယ်။
ဥပမာ – ငရုတ်သီးမှုန့်လုပ်ရာမှာ ရောထည့်တဲ့ ဖလံဖြူလို့ခေါ်တဲ့ ဖြူဖတ်ဖြူရော် ငရုတ်သီးခြောက်တွေဟာ တကယ်တော့ မှိုတက်ပြီးသားငရုတ်သီးခြောက်တွေပါ။ ရိုးရိုးငရုတ်သီးခြောက်ဆိုရင်လဲ ငရုတ်သီးထဲက အူတိုင်နဲ့အစေ့တွေမှာ မှိုတက်နေတာများပါတယ်။ အဲဒီမှိုက အာဖရာတောက်ဆင်လို့ခေါ်တဲ့ သေချာပေါက် ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့မှိုမျိုးပါ။ ငရုတ်သီးမှုန့် ကောင်းကောင်းထုတ်လုပ်ချင်ရင် ဖလံဖြူတွေ၊ အညှာတွေ၊ အရိုးတွေ သာမက အူတိုင်နဲ့အစေ့ပါ ဖယ်ပစ်ရပါမယ်။ အဲသလိုလုပ်ရင် ငရုတ်ပွအရှည်မျိုးအခြာက်ကို တစ်ပိဿာလောက်မှ ငရုတ်သီးမှုန့် ဟောလစ်(သေး)တပုလင်းစာပဲ ထွက်ပါတယ်။ အဲဒါဈေးကွက်ထဲရောင်းစားလို့ ရပါ့မလား ??
နနွင်းမှုန့်ထဲရောတဲ့ အမှုန့် က ရွံ့တမျိုးကလုပ်တဲ့ မြေ၀ါမှုန့်ပါ။ ပြဒါးပါနိုင်ပါတယ်။ အာဆင်းနစ်ပါနိုင်ပါတယ်။
ငါးခြောက်ယင်မနားအောင်သုတ်တာ ယမ်းစိမ်းပါ။ ရာနှုံးပြည့် ကင်ဆာဖြစ်စေပါတယ်။
ငါးမုန့်ဆိုတာ တကယ်တော့ ငါးနံ့ထည့်ထားတဲ့ သာကူမှုန့်နဲ့ ပြုလုပ်တာပါ။ ငါးနံ့ကိုတော့ ဓါတုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ငါးအစစ်ရဲ့ အရခွံ အကြေးခွံ အရိုး ခေါင်း ဆူးတောင်များမှ ပဲဖြစ်ဖြစ် နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ငါးအသားအစစ်နဲ့ နယ်ပြီးပြုလုပ်တဲ့ ငါးမုန့်အစစ်ဟာ အဖြူရောင် လုံးဝမဖြစ်ပါဘူး။ ငါးမုန့်ခြောက်အစိမ်းမှာ ခပ်ညိုညိုရှိပြီး ကြော်ပြီးရင် အသားရောင်ရှိပါတယ်။ အဲဒါအရာင်အလှဆုံးကိုပြောတာ။ တကယ်တော့ မဲပြီးတောင်သွားနိုင်ပါသေးတယ်။ ငါးမုန့်လုပ်နည်းတွေကို ကိုယ်တိုင်သိပါတယ်။
ပုဇွန်တွေ အလေးချိန်စီးအောင် ..ခဲတွေထည့်တာ…
ငရုပ်သီးမှုန့်တွေထဲ.. လွှစာမှုန့် အ၀တ်ဆိုးဆေးဆိုး..ဆိုးပြီးရောထည့်တာ…
စိမ်းစားငပိတောင် ဘာနဲ့လုပ်တာလည်း မသိ.. ဂွေး(ပုဇွန်မျှင်)လေးတွေနဲ့..မဟုတ်တာတော့ သေချာတယ်..။ အကောင်တကောင်ကောင်ပဲ…။
ဖွဲနုနဲ့ ကောက်ညှင်းနဲ့ ဆားနဲ့ သူကြီးရေ……..
အပုပ်ရည်များများထွက်တဲ့.. ကုန်းသတ္တ၀ါ..ခွေးလား..လူလား.. ပါတယ်ချည်းထင်နေတာ…
safety ဖြစ်ချင်ရင်တော့ တတ်နိုင်သလောက်အိမ်မှာချက်စားပေါ့။ အပြင်စာ(လမ်းဘေးစာ) နဲ့စာရင် ပိုစိတ်ချရမှာပါ။ ဆန်၊ဆီ၊ဆား၊ ငရုတ်၊ ကြက်သွန် နဲ့ ဟင်းခတ်မှုန့်တွေက စိတ်ကြိုက်ရှာဝယ်လို့ရနေသေးတာဘဲ။